Android လုလင်: January 2013
Steampunk Skull live wallpaper for Android
အရမ်းအရမ်းကို လန်းတယ်ဗျို့ သုံးကြည့်လိုက် မကြိုက်ရင် ဖြတ်သာရိုက်သွားလိုက်… full version ဆိုတော့ ဟဲဟဲ ဘယ်လိုပြောမလည်း မိုက်တာပေါ့
တကယ်လို့ သုံးကြည့်လို့ အဆင်မပြေရင်ပြော မကြိုက်ရင်ပြော ကစ်ကျော် နောက်ဘယ်တော့မှ ဒီလို live wallpapaer မတင်တော့ဘူး ဟီးးးးးးးနောက်တာ… ကျွန်တော့်မှာရှိ့တဲ့ လန်းတာလေးတွေဆို အရမ်းကို ပေးသုံးကြည့်ချင်တာပါ.. ပြောရမယ်ဆိုရင် ကြွားတယ်ဆိုတာပေါ့… စိတ်ချလက်ချ သုံးဘာမှ error မတက်စေရဘူး….၁၀၀% အာမခံတယ်… ခိခိ
Download form ifile.it
ရေးတဲ့အချိန် 9:10 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Phone နဲ့ Tablet တွေမှာ မြန်မာလိုစာလေးရေးပီး အလှဆင်ရအောင်… Minimalistic Text Widget (1.1MB) for Android
Feature Widgets: Clock, Date, Weather, Battery, Memory Status & Notes
Requirement : Android 2.2 or higher
Download Link: http://www.mediafire.com/download.php?27as2ze363yq32r
ရေးတဲ့အချိန် 9:06 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Sexy JB GO Launcher EX Theme v2.0 for Android
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Sexy ကောင်မလေးတွေရဲ့ icon လေးတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းလန်းချင်သူများအတွက် Sexy JB GO Launcher EX Theme v2.0 for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ theme လေးကိုသုံးဖို့ဖုန်းမှာ Go Launcher EX ဆော့ဝဲတော့သွင်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးမှ အခုပေးတဲ့ Sexy JB GO Launcher EX Theme v2.0 for Android ဆော့ဝဲလေးကိုသွင်းပါ။
ဒီဆော့ဝဲလေးကိုသွင်းပြီးပြီဆိုရင် Go Launcher EX ရဲ့ Theme Gallery ထဲကနေ အခုသွင်းလိုက်တဲ့ Sexy JB Theme လေးကိုရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Sexy JB GO Launcher EX Theme v2.0 for Android အားရယူရန်
ရေးတဲ့အချိန် 9:03 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Samsung Galaxy S3 Interface ကို မိမိဖုန်းတွင် သွင်းခြင်း
Samsung Galaxy S3မှာပါတဲ့ User Interface မျိုး မိမိဖုန်းမှာ ထည့်ချင်သူများအတွက်ပါ။
ပထမဆုံး Go Launcher ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။ Go Launcher နောက်ဆုံးထွက် version နှစ်ခုလုံးတင်ပေးထားပါတယ်။
မည်သည့် version မဆိုရပါတယ်။အဆင်ပြေအောင် နှစ်မျိုးလုံးတင်လိုက်တာပါ။
Go Launcher Version 3.11 ကိုဒေါင်းရန်
Go Launcher Version 3.10 ကိုဒေါင်းရန်
Go launcher ဒေါင်းပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ Galaxy S3 Theme ကိုဒေါင်းပါ။
Galaxy S3 Theme ကိုဒေါင်းရန်
ဒါဆိုရင်တော့ မိမိဖုန်းမှာ Galaxy s3 အသွင် အလန်းစား သုံးလို့ရနေပါပြီ။
ပိုပြည့်စုံသွားချင်ရင် နောက် galaxy s3 live wallpaper လိုချင်ရင်အောက်မှာ down ပါ။
Samaung Galaxy S3 Live Wallpaper ကို ဒေါင်းရန်
ကဲ အားလုံးကို install လုပ်ပြီးရင်တော့ Samsung Galaxy S3 Interface ကို မိမိဖုန်းတွင် သွင်းခြင်းပြီးပါပြီ။
Galaxy S3 interface နဲ့လန်းနိုင်ကြပါစေ….
ရေးတဲ့အချိန် 9:01 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
သီချင်းနားထောင်လျှင် စာသားဖော်ပြပေးသော Apk
ဒီကောင်လေးနဲ့ သီချင်းဖွင့်ရင် စာသားပါ မြင်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်တွေ အတွက် ပါ
http://www.crintsoft.com/ မှာလေ့လာပြီးကြိုက်ရင် အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
အသုံးပြုမယ်ဆို အင်တာနက်ကွန်ရှင်ရှိဖို့လိုပါတယ် (မြန်မာသီချင်းမပါ)
ရေးတဲ့အချိန် 8:52 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မြန်မာ့ရှမ်းကိုးမီးကစားချင်သူတွေအတွက်ပါ( Android )
ဒါလေးကတော့ Facebook မှာရေပန်းစားနေတဲ့ မြန်မာ့ ရှမ်း ကိုးမီး ဖြစ်ပါတယ်…..
ရေးတဲ့အချိန် 3:25 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
KakaoTalk Free Calls & Text V3.6.1 For Android
Android စက်ရုပ်သမားတွေအတွက် Viber ထက်လန်းတဲ့ KakaoTalk ဆော့ဝဲအလန်းလေးပါ အသံထွက်ကြည်သလို ဖက်ရှင်တွေလည်းတော်တော် စုံပါတယ် စာရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အသုံးပြုတဲ့ မျက်နှာပြောင်အရုပ်လေးတွေဟာလည်း တော်တော်ကိုလန်းပါတယ် ။ Viber လို အသံမကြည်တာတို့ ခဏခဏကျတာတို့လည်း မရှိပါဘူး အရမ်းကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ Viber ကိုကြိုက်တဲ့သူ လူဦးရေ2သိန်းကျော်ပဲရှိပါတယ် ဒီKakaoTalk ကိုကြိုက်တဲ့သူက 1 သန်းပြည့်တော့ပါမယ် ။ အသုံးပြုတာ လုပ်ရတာ Viber လိုပါပဲ ကိုယ့်နိူင်ငံရွေး ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်လိုက်တာနဲ့ သူပို့ပေးတဲ့ကုဒ်နံပါတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါပြီ သုံးကြည့်လိုက်ပါ ကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ အခုထွက်တဲ့ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဆိုဒ်က5MB ပဲရှိပါတယ် နည်းနည်းလေးပါ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ....။
ဒီဗားရှင်းဟာ မားကပ်မှာ အခုနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဖက်ရှင်အသစ်တစ်ခုတိုးလာပါတယ် ။ Friends အပ်ဖို့ရန်လွယ်ကူစေဖို့ QR ဆိုတဲ့နည်းလေးတိုးလာပါတယ် ။ ကိုယ်အပ်မယ့်သူတစ်ယောက်ရဲ့ QR ဓါတ်ပုံကို Kakao ထဲကနေ ကင်မရာဖွင့်ပြီး ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်အပ်မယ့်သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။ ကိုယ်ပိုင် QR ယူနည်းနဲ့ ။ အပ်မယ့်သူရဲ့ QR ဖတ်နည်းကို အောက်မှာ သေချာရေးပေးပါ့မယ် ။
ဘယ်ဘက်ထောင့်ဆုံးက Friends ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်ကMenu ခုလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Find ဝင်ပါ အဲဒီမှာ Find Friends with IDs ရွေးပြီး သူငယ်ချင်း ID ကိုရိုက်ပြီးရိုက်လိုက်ပါ ပြီးရင်နှိပ်ပြီးအပ်လိုက်ပါ ID မှားနှိပ်မိရင် တခြားတစ်ယောက်ကိုမှားအပ်တာကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ခိခိ စိတ်ချရတဲ့နည်းကတော့ ဖက်ရှင်အသစ်တိုးလာသော QR နဲ့အပ်နိူင်ပါတယ်
QR နဲ့ Friends အပ်နည်းကတော့.......
ဘယ်ဘက်ထောင့်ဆုံးက Friends ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်ကMenu ခုလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Find ဝင်ပါ အဲဒီမှာ Find Friends with QR code အဲဒီကိုဝင်လိုက်ရင် ကင်မရာပွင့်သွားမယ် ကိုယ်အပ်မယ့်သူရဲ့ QR ကိုဖတ်လိုက်ရင် ကိုအပ်မယ့်သူပေါ်လာမယ် ။ ကိုယ်ပိုင် QR ယူနည်းကတော့ အဲဒီပွင့်လာတဲ့ကင်မရာအောက်နားမှာ My QR code ဆိုတာဝင်လိုက်ပါ ကိုယ်ပိုင် QR ပေးပါလိမ့်မယ် အဲဒီပုံကို သိမ်းထားချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှယ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်မှာနှိပ်ပြီး သိမ်းနိူင်ပါတယ် ။ ပြီးရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်အပ်ချင်ရင် အဲ့ပုံပေးလိုက်ယုံပါပဲ ဖတ်ပြီးအပ်နိူင်ပါပြီ ကိုယ်အပ်မယ့်သူ တိတိကျကျကို ထွက်လာပါမယ်.......တိန့် တိန် တိန်
(( Find Friends with QR code ဆိုတဲ့စာတန်းဟာ အရင်ဗားရှင်းတွေမှာ မပါပါဘူး နောက်ထွက်ဗားရှင်းမှာပဲ ပါပါတယ် ))
မားကပ်မှာ အခုနောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း KakaoTalk Free Calls & Text V3.6.1 ကို လိုချင်သူများ ဒီမှာဒေါင်...
ရေးတဲ့အချိန် 3:23 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Viber အတွက် Code တောင်းရ ခက်နေတဲ့ သူတွေ ပြန်မပို့တဲ့သူတွေအတွက်
Website ကနေ တောင်းဖို့
ဒီအောက်က Link လေးမှာ သွားရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 3:19 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရေးတဲ့အချိန် 3:17 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် Mobile Alarm System လို့ခေါ်တဲ့ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကိုယ့်ဖုန်းတစ်နေရာမှာမေ့ကျန်ခဲ့လို့ဖြစ်စေ ၊ တစ်နေရာမှာ ခဏထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ၊ ကိုယ်မရှိခင်အချိန်လေးမှာ တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ဖုန်းကို ကိုင်တာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဆော့ဝဲလေး Mobile Alarm System ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Android ဖုန်းတော်တော်များများမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အချက်ကတော့
-ဖုန်းကိုလက်ရှိထားတဲ့နေရာကနေ ရွေ့သွားအောင်ကိုင်မိရင် ဖုန်းက Alarm ထမြည်လာခြင်း
-Proximity Sensor ကိုအသုံးပြုထား၍ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထိလိုက်တာနဲ့ ဖုန်းက Alarm ထမြည်လာခြင်း
- ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားစဉ် (သို့) အားသွင်းနေစဉ် ဖုန်းကြိုးကိုတစ်ယောက်ယောက်က ဆွဲဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းက Alarm ထမြည်လာခြင်း
- ဖုန်းမှာပါတဲ့ Camera ကို ဆော့ဝဲက auto အသုံးပြုပြီး ဖုန်းရှေ့မှာ တစ်စုံတစ်ခုလှုပ်ရှားမှုတွေ့တာနဲ့ ဖုန်းကချက်ချင်း Alarm မြည်ပြီး အဲဒီလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်အပျက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားနိုင်ခြင်း စတဲ့ features အလန်းစားတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကို Google Play မှာ ၁.၂၅ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ဒီမှာတော့ freedownload ရယူနိုင်ပါတယ်။ အောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Mobile Alarm System v1.2.3 ကိုရယူရန်
ရေးတဲ့အချိန် 3:00 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Folder Organizer v3.6.4 APK
ဒီ Application ဟာ Android OS အတွင်းမှာရှိတဲ့ Application တွေကို သက်ဆိုင်ရာတူညီရာတွေကိုစုစည်းပြီး Folder တစ်ခုထဲမှာ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းပြီး အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့ Application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ထည့်သွင်းချင်တဲ့ Application Icon ကို ဖိနှိပ်ပြီး Drag ဆွဲ၍ Folder တစ်ခုထဲအတွင်းမှာ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:39 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ပြိုင်ဘက် browser များထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလျင်မြန်သည့် Baidu မိုဘိုင်း Android browser
တရုတ် search engine ကုမ္ပဏီ Baidu ကပြိုင်ဘက်မိုဘိုင်း browser များထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုလျင်မြန်သည့်မိုဘိုင်း browser သစ်တစ်မျိုးကို Android ဟန်းဆက်များအတွက် ဖြန့်ချိပေးခဲ့သည်။
Baidu Explorer ဟုအမည်ရသည့် အဆိုပါမိုဘိုင်း browser သစ်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် developer conference တွင် မိတ်ဆက်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် T5 ဟုခေါ်သည့် engine သစ်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုကြသည့် တရုတ်ဈေးကွက်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Baidu Explorer တွင် Baidu search engine ကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ Baidu Explorer ကို Android အပြင် Windows Phone (Mango) အတွက်လည်း ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို http://shouji.baidu.com/browser တွင် တိုက်ရိုက် download ရယူနိုင်ပြီး Android 2.2 နှင့်အထက်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:41 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရေးတဲ့အချိန် 4:48 PM 11 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဘော်ဘော်တွေ အတွက် ။ ဒါမှ မဟုတ် လိုအပ်လာတဲ့ အခါ သုံးဖို့ ဒီ ကင်မရာလေးတော့ ရှိထားမှ ဖြစ်မှာပဲ။ ;P
Android Phone အားလုံးနီးနီးနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိပါတယ်။
Feature တွေ တစ်ချက်လောက် လေ့လာလိုက်ကြပါဦးနော်။
ကဲ ဒါက Screen Shoot လေးတွေ
Android Phones တော်တော်များများမှာ စမ်းသပ် အသုံးပြုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ လိုချင်ရင် အောက်ကလင့်ခ် လေးမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါနော်။။။
Syp Camera OS(Open Source)
ရေးတဲ့အချိန် 12:49 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
App Hider for Root User
App Hider Application လေးပါ။တော်တော်လေး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 
Application ကောင်းလေးပါ။ ဒီ Application လေးကို
Root ထားမှသာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါဗျ။မိမိတို့ ဖုန်းကို တစ်ခြားသူများအသုံးပြုတဲ့ 
အခါကျတော့ မိမိတို့ မမြင်စေချင်တဲ့Application လေးတွေကိုဖျောက်ထားချင်တဲ့ 
အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Application လေးကို အသုံးပြုပုံကတော့
ပထမဦးဆုံး Application လေးကိုဖွင့်ပါ။ Password ပေးပါ။အောက်က box မှာ ထပ်ပြီး
Repeat Password ပေးပါ။ အဲဒါဆို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Dropbox Download>> https://www.dropbox.com/s/mv2g2ahqd97ry44/apphider.apk
ရေးတဲ့အချိန် 12:46 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Phone နဲ့ Tablet တွေမှာ မြန်မာလိုစာလေးရေးပီး အလှဆင...
Samsung Galaxy S3 Interface ကို မိမိဖုန်းတွင် သွင်...
မြန်မာ့ရှမ်းကိုးမီးကစားချင်သူတွေအတွက်ပါ( Android )...
ပြိုင်ဘက် browser များထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလျင်မြန်သ...
Android ဖုန်းမှာလည်း gmail အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသုံးလ...
Facebook က မိမိရဲ့ Wall ပေါ်ကို Photoနဲ့Video တွေြ...
Android ဖုန်းတွေအတွက် အသံနဲ့ပါ Chatting လုပ်နိုင်မ...
Android Google Play Store ကို VPN အသုံးပြုပြီးဖွင်...
CallRecorder Full v1.2.9 For Android
Proxy ကျော်လို့ရတဲ့ ProxyDroid For Android
APN Swicth for Android
Mandalay FM Radio Station APK
Root မလိုပဲAndroid ဖုန်းတိုင်းမြန်မာလို SMS ပို့မယ...
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပုံတော် Android Live Wall Paper
Android သုံး မြန်မာစာသတ်ပုံကျမ်း
Android အတွက် TeamViewer
ဖုန်းကို Internet ဖွင့်ပြီး ပြန်ပိတ်ဖို့မေ့တတ်သူအတ...
Viber ထက်သာတဲ့ Line Free Call Line
MPT GSM Top Up 5000 Ks Password Code KeyGenerator
လေမှုတ်လိုက်ရင် skirt လန်သွားတဲ့ game PUFF! v1.2.0...
Android မှာ Start menu ထားခြင်းတဲ့သူများအတွက် Star...
သင်ဘယ်လောက်လှသလဲဆိုတာ တိုင်းတာပေးမယ့် Beauty Meter...
Android မှာအင်တာနက်ပြန် share ပေးခြင်းတဲ့သူများအတွ...
WiFi Free ရတဲ့နေရာတွေကိုရှာမယ် for Android
Android Home Screen မှာ မိမိစိတ်ကြိုက် Shortcut Fi...
Android ဖုန်းပိုင်ရှင်အားလုံးဆောင်သင့်တဲ့ MobileGo...
Samsung Galaxy ဖုန်းတွေကိုပိုက်ဆံတစ်ပြားမှာမကုန်ပဲ...
စာလုံး အလှလေးတွေနဲ့ sms ပို့ ချင်သူတွေအတွက် Symbol...
Phoner ပျောက်ပြန်ရှာပေးမဲ့ software လေးနော်
ဖုန်းနဲ့ Computer ကိုချိတ်ပြီး Network သုံးရင်
Android မှာ သီချင်းတွေကို Beat အသံနဲနားထောင်ခြင်းတ...
Android မှာ ဖိုင်တွေကို ကိုယ်ပဲကြည့်မယ် သူများကို ...
Galaxy Gio ကို 2.3.6 တင်ရအောင်
Android မှာ google talk ထည့်တာအဆင်မပြေသူတွေ အတွက် ...
အသံဖမ်းတဲ့ဆော့ဝဲ(အရမ်းကောင်းတာက အချိန်ဇယားနဲ့ဖမ်...
Samsaung Phone ကိုင်ဆောင်သူများသိရှိရန်
Offline သုံး GPS
Titanium backup apk and File Expert apk
Death Moto !
Galaxy Gio S5660 ကို Pattern Lock ဖြည်နည်း…..
Google Play ထဲ ၀င်ရောက်ခြင်သူတွေအတွက်